Izintshisekelo eziyi-10 zaseParis ezizokushiya ungawuvali umlomo | Izindaba Zokuhamba
UMonica sanchez | | General, EParis, Yini ongayibona
IParis idolobha elinalo okuningi ongakunikela. Izindawo ezigcwele intelezi lapho ungazilahlekela khona esixukwini noma izikhumbuzo ezinhle ezihlobisa inhlokodolobha, ngenkathi ujabulela isimo sezulu esimnandi unyaka wonke.
Ngendawo engamakhilomitha-skwele ayi-105, futhi unezimangaliso eziningi kakhulu ongazibona kunoma iyiphi ikona, impela i- Izintshisekelo eziyi-10 zikaParís ukuthi ngizokutshela, ubungabazi.
1 Ikhona laseGibhithe enhlokodolobha
2 Kunezithombe ezintathu zeLiberty!
3 Okwekusasa, isinkwa noshizi. Nesidlo sasemini, nangesidlo sakusihlwa ...
4 Ungacabanga ngeParis nge-guillotine enkulu?
5 Ikota yesiLatin, indawo enomoya omkhulu
6 I-kilometre zero, esigcawini se-Notre Dame
7 IParis igweme ukuba nezifunda eziyi-13
8 Izitebhisi ezivuthayo zeLouvre Museum
9 Izimfihlakalo Zase-Notre Dame Cathedral
10 Khonzani, ubuciko
Ikhona laseGibhithe enhlokodolobha
IPyramid yaseLouvre Museum yaklanywa ngumdwebi u-Ieoh Ming Pei, futhi yavulwa ngonyaka we-1989. Inobude obungamamitha ayi-20,1m kanye namapaneli engilazi anamapulangwe angama-673. Ngesisindo samathani ayi-180, ngaphakathi kwezinga lokushisa kufana ncamashi nalokho okubhaliswe ku-pyramid of Cheops, eGibhithe: 51 degrees Celsius. Yini enye, inezilinganiso ezifanayo.
Kunezithombe ezintathu zeLiberty!
Eyaziwa kakhulu ise-United States, eningizimu yesiqhingi saseManhattan, kepha kunezimpawu ezimbili eziseFrance: esisodwa siseColmar, savulwa ngo-2004, kanti esinye siseParis. esiQhingini Swan. Lesi sakamuva sakhiwa ngumculi wase-Italy-waseFrance u-Auguste Bartholdi, futhi savulwa ngoJulayi 4, 1889.
Okwekusasa, isinkwa noshizi. Nesidlo sasemini, nangesidlo sakusihlwa ...
Uma wake wezwa othile ethi abaseParis badla isinkwa noshizi nsuku zonke futhi awukholwanga, ubungalungile. Kubo, lokhu kudla okubili kuyisisekeloKangangokuthi balandela nemithetho eqinile kakhulu ukuthola ama-baguette amahle kakhulu noshizi omuhle kakhulu. Futhi yeka ukuthi zenziwe kahle kanjani zisanda kwenziwa ...!
Ungacabanga ngeParis nge-guillotine enkulu?
Okuncane kwasala ukuyakha. Futhi ngukuthi, kuMbukiso Womhlaba Wonke we-1889, kwaba nomncintiswano wokwakha umsebenzi omkhulu, owawuzogcina usuyisisekelo sedolobha. Phakathi kwezinye iziphakamiso, bekukhona lokho yakha i-guillotine ephakeme ngamamitha ayi-274, ukukhumbula igalelo laseFrance kulo mkhuba. Ngenhlanhla, ekugcineni, kwanqunywa ukuthi kwakhiwe i-Eiffel Tower, engenalutho oluhlambalazayo futhi engaziqhayisa ngokuba nenani eliphezulu lokuhlobisa.
Ikota yesiLatin, indawo enomoya omkhulu
Itholakala eningizimu ye-Ile de la Cité, futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu. Ngesikhathi seNkathi Ephakathi, kwakuhlala abafundi abakhuluma isiLatini. Kumele kushiwo ukuthi lokhu bekungenye ye izindawo ezishisayo phakathi no-1968 Meyi Revolution, yize namuhla kuyindawo ethule, enezindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle ezikumema ukuba uhlale futhi uphumule.
I-kilometre zero, esigcawini se-Notre Dame
Akusona isikhungo seFrance, kepha kuseParis. kusuka kuleli phuzu, kusuka ePoint Zéro ababiza ngakho, ungabala ibanga layo yonke imigwaqo edolobheni. Esifundeni kuvame ukuthi kuthiwe labo abanyathela kuso bazobuya, ngoba inhlanhla izobaphelezela lapho besekhona.
Asazi noma kuyiqiniso noma cha, kepha indawo iyathandeka impela.
IParis igweme ukuba nezifunda eziyi-13
Inombolo 13 yayi (futhi isekhona nanamuhla ngamasiko amaningi) ibibheka inani lenhlanhla. Ngesikhathi seFrance Revolution yango-1795, 12, no-48 kwehlukaniswa iziqeshana kwasungulwa, kepha babengafuni ukusungula eyodwa futhi ngokwesaba ukuthi idolobha lingawa emseni. Into okusobala ukuthi ayenzekanga, ngoba namuhla inezifunda ezingama-20 futhi isaphila kakhulu kunakuqala.
Izitebhisi ezivuthayo zeLouvre Museum
EMnyuziyamu yaseLouvre siyabona futhi sisebenzise izitebhisi ezinhle zokuvunguza. Kepha, bewazi ukuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene nokuthi zinemisebenzi ehlukile? Yizinto eziheha ukunakwa okuningi, kangangoba umakhi owaziwayo uchithe iminyaka eyi-10 ezifunda. Manje wenze umsebenzi omuhle, lapho exoxa khona indaba yakhe, ukubaluleka kwabo, isizathu sokuphumelela kwakhe, nokunye okuningi. Ngeminye imininingwane, sincoma ukuthi ufunde ifayili le- mqondo wobudokotela womklami u-Alberto Sanjurjo.
Izimfihlakalo Zase-Notre Dame Cathedral
Yisonto lombhishobhi elidume kakhulu eGothic emhlabeni, nesikhumbuzo esivakashelwa kakhulu eParis. Ungayithola ku-Ile de la Cité, lapho i- bhekumuzi abakhipha amanzi ophahleni, okukholelwa ukuthi bavuke ngobusuku okwashiswa ngabo uJoan wase-Arc esigxotsheni.
Akwanele ukusho ukuthi uBonjour noma uBonsoir (njengoba kungenzeka) ngezwi elijwayelekile lezwi, kepha kunalokho zijwayeze kakhulu ukuze iphume njengemvelo ngangokunokwenzeka. Abantu baseParis bayaluthanda ulimi lwabo, ngakho-ke uma ubabingelela cishe, ngoba ukuphelela ngokuphelele akukho- ukubingelela okuhle, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzozijabulela izingxoxo onazo nabo kakhulu.
IParis yidolobha lapho ukulahleka kuhlala kuyintokozo, ikakhulukazi ngemuva kokufunda lezi zilangazelelo, awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » EParis » Izintshisekelo zaseParis ezizokushiya ungawuvali umlomo
Ukuhambela eKrakow, ukuthi yini ongayibona edolobheni